November 8, 2021 – သုတရသ
အော်တိုဂီယာကားကိုစနစ်တကျ ဘယ်လိုရပ်မလဲ ?
Nov 8, 2021 Shwe Myanmar
အော်တိုဂီယာကားမောင်းသူတွေ ပြုလုပ်တတ်ကြတဲ့ ကားရပ်တန့်နည်း နှစ်နည်းရှိပါတယ်။ ပထမတစ်နည်းကတော့ P ကိုအရင်ပြောင်းပြီး Parking Brake (ဟန်းဘရိတ်) ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယတစ်နည်းကတော့ Parking Brake (ဟန်းဘရိတ်) ကိုအရင်အသုံးပြုပြီးမှ P ကိုပြောင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မျိုးစလုံးသည်…
အလမ္ပာယ်ဂီတနဲ့ မြွေ ကသလား?
အလမ္ပာယ်ဆရာက ပုလွေမှုတ်ရင် မြွေက ပါးပျဉ်ထောင်ပြီး ဂီတအသံအတိုင်း လိုက်က သလိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မြွေက နားကြားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဂီတသံကြားလို့ ကတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြွေဟာတုန်ခါမှုကို အလွန်ခံစားလွယ်တယ်။ ပခြုတ်ခြင်းထဲမှာ ထည့်ထားရင်တောင် မြေကြီးရဲ့ တုန်ခါမှုကို ခံစားတုန့်ပြန်တယ်။ အလမ္ပာယ်ဆရာဟာ ပုလွေကိုမှုတ်နေတဲ့…
မနာကျင်ပဲ ခြေစွယ်ငုတ်သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း
ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းက ခံရခက်ပြီး ကုသလို့ အမြစ်မပြတ်ပဲ ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တစ်ချို့တွေဆို မျက်ရည်ကျသည်ထိ လှီးဖြတ်ပြစ်ကြပြီး ဆီချက်ပူ လောင်းထည့်တာမျိုးလည်း မြင်ဘူးပါတယ်နောက်တော့ ပြန်ဖြစ်တာပါပဲလေ။ခု ပြောပြမယ့်နည်းလေးက မနာမကျင်ပဲခြေသဲတစ်ဖြေးဖြေး ပြန့်လာပြီး နောက်ထပ် ခြေစွယ်မငုတ်တော့ပါဘူး။ ခြေသဲလေးကလည်း နူးညံ့ချောမွတ်ပြီး လှပလာပါလိမ့်မယ်နော်။ဆေးက အဝေးကြီး…
ဆောင်းတွင်း နံနက် စောစောမှာ ဥယျာဉ်ပန်းခြံလေးတွေထဲက သစ်ရွက်လေးတွေ မြက်ခင်းလေးတွေပေါ်မှာ နှင်းစက် နှင်းပေါက်ကလေးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သစ်ရွက်လေးတွေပေါ်ကို နှင်းစက်ကလေးတွေ ကျရောက်နေတယ်လို့ပဲ ပြောတတ်ကြတယ်။ နှင်းစက်ကလေးတွေဟာ အပေါ်က ကျလာတယ်လို့ ထင်နေတတ်ကြတယ်။ ပုံမှန်နှင်းကတော့ အပေါ်ကကျတာ မှန်ပေမယ့် မြက်ပင်ပေါ်က…
ကားစီးရင် ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင် အမြဲ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း
ကားစီးရင် ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင် အမြဲ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း ကျတော်ငယ်ငယ် ကားစီးရတာကြိုက်ပေမဲ့ အသက်20 လောက်မှာ ကားစီးရင် ကားမူးလာပါတယ် ။ ကားမူးတက်တဲ့ ကျတော့သောက်ကျင့်ကို ကျတော်လွန်စွာမှမုန်းပါတယ်။ ကားစီးရင်ကားမူးပျောက် ဆေးသောက်ရပါတယ် မသောက်ဘဲကားစီးမိရင် လူကမူးမော့နေတာ၊…
ဒီရှေးစကားလေးကို ငယ်စဉ်ထဲက ကြားဖူးနားဝရှိခဲ့တာကြာပါပြီ။ သို့သော်ငြား အဲဒီစကားကို အရင်တုန်းကတော့သာမနျအပေါျယံအတှေးလေးနဲ့တှေးမိခဲ့ ဖူးပါတယ် “အပျကလေးတဈခြောငျးပြောကျတာမြား ဆငျစီးပွီးရှာစရာလား” ဆိုတဲ့အတွေးထက်ပိုပြီး နက်နက်နဲနဲမတွေးမိ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ စာပေဗဟုသုတတွေ ဖတ်မှတ်လေ့လာရင်းနဲ့ အမြင်မှန်ရသွားခဲ့ရပါတော့တယ် (အပ်ပျောက်ရင် ဆင်နဲ့ရှာ)ဆိုတဲ့ဝေါဟာရ စကားလေးဟာ အင်မတန်မှ…
လန်ဘော်ဂီနီကားကြီးတွေကို တစ်နေ့တစ်စီးဖြင့် မရိုးအောင်ပြောင်းစီးနေပြီး စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းလှသော အလှအပတို့ကြောင်း နာမည်ကြီးလာခဲ့သည့် ကောင်မလေ
လူ့လောကကြီးထဲတွင် ငွေကြေးများသည် မရှိမဖြစ်အောင် အရေးပါလှသောအရာဖြစ်ပေသည်။လူဘုံအလယ်တွင် ပင်ကိုအလှတရားများဖြင့် ငွေကြေးကြောင့် ရရှ်လာသော အလှတရားနှင့်ဂုဏ်သိမ်ဒြပ်တို့ဟာ ပိုမိုပြီး ထွန်းလင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Jessie Luongဆိုသည့် အသက်၃၀အရွယ်အမျိုးသမီးဟာ အတော်လေးနာမည်ကြီးပြီး ကောင်လေးတို့၏ အသည်းစွဲဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ အမျိုးသမီးဟာ လူတိုင်းမစီးနိုင်သည့်…
ရေခဲမုန့်ကို အင်္ဂလန်က စခဲ့တယ်လို့ အမှတ်မှားနေကြတယ်။ တကယ်က အရှေ့အာရှက စခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီက ခရီးသည်ကြီးမာကိပိုလိုဟာ အရှေ့အာရှဒေသ ကရေခဲမုန့်လုပ်နည်းကို အီတလီကိုသယ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အီတလီကမှ ပြင်သစ်ကိုရောက်သွားတယ်။ဥရောပက လူကုံထံတွေဟာရေခဲမုန့်လုပ်နည်းကို လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ကြလို့သာမန်လူတွေမစားနိုင်ခဲ့ကြဘူးတဲ့။ ၁၈၅၁ မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မေရီလင်းပြည်နယ်…
ကားတစ်စီးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် အဓိကစစ်ဆေးသင့်တဲ့ အချက်များ
ဒီခေတ်မှာ ကားတစ်စီးကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူရှာဖွေနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ကားပိုင်ဆိုင်ပြီးသားသူတွေနဲ့ ကားပိုင်ဆိုင်ဖို့ စိတ်ကူးနေတဲ့သူတွေ သိသားသင့်တဲ့ ကားတစ်စီးမဝယ်ခင် အဓိကထားဦးစားပေး စစ်ဆေးသင့်တဲ့ အချက်တွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကားအကြောင်း နားလည်တဲ့သူမဟုတ်ရင် ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကို ခေါ်သွားပြီး အောက်မှာပြောထားတဲ့ အချက်တွေကို ဦးစားပေးစစ်ဆေးပါလို့…
မီးသွေးမှုန့် ဟာ အရှေ့တိုင်းမှာရော အနောက်တိုင်းမှာပါ ဆေးပညာ၊ ကျန်းမာရေး၊ အလှအပရေးရာတွေမှာ တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာတာ ကြာလှပါပြီနော်။ အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ မီးသွေးမှုန့်ကို နေ့စဉ် ဘဝ မှာ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ၊ ဘယ်လောက်တောင် အသုံးဝင်လဲဆိုတာ ဗဟုသုတအဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)…